Igumbi lokujonga iLake elinendawo yokupaka yasimahla! - I-Airbnb
Igumbi lokujonga iLake elinendawo yokupaka yasimahla!
Eli gumbi liyilwe ngokugqwesileyo iNew Acton libonelela ngentuthuzelo kunye nesimbo kumgangatho we-10 wesakhiwo esiphumelele ibhaso kunye ne-eco-friendly 'Nishi'. I-CBD ngaphakathi kwayo, indawo entsha yenkcubeko ye-Acton kunye ne-cinema iqhayisa icinema yayo, igalari yobugcisa, isaluni, kunye neyona ndawo ibalaseleyo kwiivenkile zokutyela zaseCanberra, kubomi basebusuku kunye nokutya. Ukuba unqwenela ukungena ngaphandle kwemida yendawo, iFloriade (ngoSeptemba-Oct), i-ANU, iNdlu yePalamente kunye nezinto ezininzi ezinomtsalane kubakhenkethi zonke zikumgama wokuhamba.
Unofikelelo olukhethekileyo kwiflethi ngexesha lokuhlala kwakho. Kukho isitshixo sebhokisi yokungena kwaye uphume, kwaye eyakho ipaki yemoto ephantsi komhlaba enikezelweyo ikufuphi neelifti, ezikusa kumgangatho we-10 apho ikhoyo ifulethi.
ISakhiwo saseNishi sinomlinganiselo wokusebenza kakuhle kwamandla we-8, kunye noyilo lwesolar passive, umoya onqamlezileyo kunye nokufakwa kwe-thermal mass. Ezi mpawu zigcina igumbi lipholile eHlobo ngaphandle kwesidingo somoya opholileyo ongaqhelekanga! Nkqu nendawo yokufudumeza indlu ayifane ifuneke, ngaphandle kobo busuku bubandayo baseCanberra.
Le ndlu yodidi lwesitudiyo inebhedi ye-Murphy yobukhulu bukakumkanikazi enelinen entsha ecocwe ngokobuchule kwaye icinezelwe ukuba uhlale. Kukho indawo eyaneleyo yewodrophu yomthwalo wakho, kubandakanywa ii-hangers zempahla yakho (ikhabhathi kumacala omabini ebhedi njengakwindlela yokungena ngaphambili). Kukwakho ne-pedestal fan ebonelelweyo ukuze kube lula kuwe.
ICanberra inokubanda kakhulu kwiinyanga zethu zobusika kwaye isifudumezi sethu siwonga amandla oko kuthetha ukuba kunokuthatha ixesha ukufudumeza! Nceda uqinisekise ukuba iswitshi eseludongeni ebhalwe ‘ubushushu’ ilayitiwe kwaye uvula iqhoshana kwisifudumezili kwisifudumezini esifunwayo (0-5). Kungathatha iiyure ezimbalwa ukufikelela kwindawo oyifunayo!
Nceda uqaphele ukusetyenziswa kwezixhobo zombane. Kangangoko kunokwenzeka, musa ukusebenzisa izixhobo zombane zonke ngaxeshanye njengoko oko kuya kubangela ukukhubeka kombane kunye nempazamo ekusetyenzisweni kwayo. :)
Igumbi lokuhlambela libandakanya itawuli eshushu kwaye igcwele iitawuli, iphepha langasese, ukuhlamba umzimba kunye neshampu.
Ikhitshi ixhotyiswe nge:
- isitovu segesi
- iipleyiti, iimagi, iiglasi, kunye neempahla
- iimbiza zokupheka kunye neepani
- izinto ezisisiseko zokupheka kunye nokucoca, kubandakanywa ityuwa kunye nepepile, ioli yomnquma kunye nomgubo wokuhlambela izitya
Sigcina ukutya okulula kwasekuseni okufana ne-muesli, ubisi, ikofu kunye neti. Iindwendwe kuya kufuneka zithenge ukutya ukuze zihlale ixesha elide.
Igumbi lokuhlala linebhedi ekhululekile kunye ne-4K Ultra HD ye-TV ye-LED, kunye ne-Netflix ifakiwe simahla! Indlu ikwaxhotyiswe nge-WIFI engenamda nge-NBN yokufikelela ngokukhawuleza nangokulula kwi-intanethi.
Indlu inomatshini wayo wokuhlamba kunye nesomisi, kunye ne-ayina kunye nebhodi yoku-ayina.
Indawo ekhululekileyo yangaphandle ikuvumela ukuba uhlale emva kwaye wonwabele iimbono ezimangalisayo zepanoramic ngaphesheya kwechibi ukuya kwiNdlu yePalamente, iNkundla ePhakamileyo, iMyuziyam yeSizwe kunye nangaphaya kweentaba.
Ngenxa yobhubhane, iindawo eziqhelekileyo zinokuvalwa ngaphandle kwesaziso sangaphambili. Nceda ujonge izikhokelo ezihlaziyiweyo kunye nezibhengezo kwindawo ngexesha lokufika kwakho.
Kukho indawo yomlilo enkulu kwindawo yokuphumla kaNishi, apho unokuphumla khona ngencwadi elungileyo kunye neglasi ebomvu yeCanberra.
I-Wifi – i-45 Mbps
4.74 out of 5 stars from 310 reviews
4.74 · Izimvo eziyi-310
Isakhiwo sikaNishi sinokuninzi esinokukunika. I-Makeshift cafe esezantsi ayipholanga kwaye imnandi kodwa ineyona ikofu ibalaseleyo. Ikhitshi leMonster kunye neBar inokutya okumangalisayo kwesidlo sakusasa, sasemini kunye nesangokuhlwa. Qiniseka ukuba uyabhukisha, idume kakhulu :)
IBar yeParlor yenye indawo yokutyela epholileyo kukuhamba umzuzu nje omnye. Ifumaneka kwisakhiwo sembali esidwelisiweyo esasiyiHotele Acton, iParlor ibonelela ngesidlo sasemini, isidlo sangokuhlwa, i-snacks kunye neecocktails ezimangalisayo, iiwayini kunye neebhiya. Ungatyela ngaphakathi okanye uthathe izidlo ezilungiselelwe kwangaphambili (ngewayini okanye ibhiya) ubuyele eflethini ukuze ukonwabele iimbono ezimangalisayo zechibi.
Izimvo eziyi-9 545
Ubukhulu becala ndifumaneka ngokuthumela imiyalezo yakwa-Airbnb kodwa ndibanika ubumfihlo kwiindwendwe zam. Ukuba kukho umba ongxamisekileyo, ungasoloko undifowunela.
Kudala ndihlala eCanberra ixesha elide ngoku kwaye ndinokukunceda ukuba uhambe ngendlela yakho kwindawo yendawo ukuba uyafuna. Ndingakunika naziphi na iingcebiso ngeendawo ezilungileyo zokuya kutya okanye ukonwabele nje!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Canberra